सम्मृद्ध सिद्धलेक बनाउने काम सुरु भईसकेको छ : प्रेमनाथ सिलवाल
सोमबार, साउन २६, २०७७ ०५:०१:२२ युनिकोड
त्रिशुलीबाट बालुवा निकाल्न दिनुपर्ने माग राख्दै मजदुरहरु आन्दोलित
कोरोना कारण विदेशमा १ सय ९१ नेपालीको मृत्यु
नेत्रावती डवजोङमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ पुग्यो
धादिङमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय ४२ पुग्यो(विवरण सहित)
थाक्रेको पोखरीचौरमा ४ दिने होमस्टे तालिम सम्पन्न(फोटो फिचर)
कोरोना संक्रमित भेटिएपछि आदमघाट बजार सिल
छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी सूचना !
कोरोना अपडेट: शनिबार ४ सय ९९ जना डिस्चार्ज,३ सय ७८ संक्रमित थपिए
मनसुन पुनःसक्रिय, शनिबारदेखि तीन दिनसम्म वर्षा हुने
धादिङ अस्पतालमा अर्थोपेडिक सर्जरी सेवा सुरु
तीन वटा बाटोहरु पीच गर्ने तयारी
शनिबार, असार १३, २०७७ Dhading Sanchar
धादिङ,१३ असार ।
सिद्धलेक गाउँपालिकामा समग्र सडक, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई तथा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम भईरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ विकास निर्माण भन्दा पहिले कोरोना बाट जनतालाई बचाउनु पर्ने भन्दै आफु सजगता भएर बस्न सक्यौँ भने हामीले अवश्यनै कोरोनालाई जित्न सक्छौं ।’ यस्तै गाउँपालिकाको समग्र विकास,भावी योजना,कोरोना बिरुद्ध गाउँपालिकाले गरेको गतिबिधिका बिषयमा जनतासँग रेडियो प्रमुख रेडियो कार्यक्रममा पत्रकार रामकुमार थापाले सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालसँग गर्नुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
१. कत्तिको धपडी भईरहेको छ काममा ?
एक दिन पनि वस्न पाईरहेको अवस्था छैन । लकडाउन भएदेखि बाहिर बाहिरै हिडिरहेको छु ।
२. हामी उत्साहका साथ काम गरिरहेका थियौं,कोरोनाले समस्या पार्यो होईन ?
आर्थिक संकट पार्यो । गत वर्षको ०७६/०७७ को बजेट खर्च गरेर भ्याउने छौं । तर ०७७/०७८ को बजेटमा प्रभाव पार्ने छ ।
३.सिद्धलेक गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि के गरिरहेको छ ?
मुख्य कुरा जनचेतना नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक जनतालाई चेतनामुलक रुपले सन्देश प्रवाह गर्ने क्रममा वडा अध्यक्ष लगाएत हाम्रो जनप्रतिनिधी साथिहरु कर्मचारी साथीहरु लागेका छन् । साथ साथै यसलाई न्युनिकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले तीन वटा विद्यालयलाई गोल्मारानी आ.वि., नागेश्वरी आ.वि र मिन्दुका मा.विमा क्वारेन्टाईन पनि स्थापना गरेका छौँ।
त्यहाँ लगभग ८४ जना अटाउने बनाएका छौं । हामीले के विचार गरेका छौ भने यदि ईन्डीया बाट आएकालाई होम क्वारेनटाईनमा बस्नुपर्छ भनेका छौं । मान्छेहरु धेरै गरेकोले संक्रमित नफैलियोस् भनेर निगरानीका साथ काम गरिरहेका छौं । विद्यालयको क्वारेन्टाईनमा राख्दा शौचालयहरु एउटै प्रयोग गर्ने वस्ने ठाउँ एकै भएकोले झन् भयावहको स्थित आउन सक्ने हुनाले होम क्वारेन्टाईनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर कार्यपालिकाका साथीहरु र राजनितिक दलका साथीहरु सँग छलफल गरेर हामीले होम क्वारेनटाईनमा राखेका छौँ ।
४. कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि सिद्धलेक गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ र यो लडाईमा अवश्य जित्ने छ पनि ?
हामीले तीन वटा विद्यालयलाई आईसोलेशन कक्ष बनाउने छौं । फोकस नेपाल र क्रिश्चियन एडको साँझेदारीमा ८० वटा बेडहरु आएको छ । सबै तीन वटा विद्यालयमा राख्ने छौँ । हामीले सबै छुट्टा छुट्टै बनाउने छौँ ।
५. सिद्धलेक गाउँपालिकाका नागरिकहरु भोक बाट, रोग बाट र अन्य गतिविधी बाट बचाउन तत्पर छ र के गर्नुपर्ने त्यो गर्ने क्रममा कुनै कशुर बाँकी राख्दैन हामी त्यही बुझम ?
६. नीलकण्ठ र गाउँपालिका बाट छुटिने सडक विस्तार र उन्नतीको लागि अलि ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्दछु साथै थोपल खोलाको पार्जित गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । राजन श्रेष्ठ नीकलण्ठ नगरपालिका)
पुलको लागि डिपीआर हुन्छ । म अस्ति भर्खर प्रदेश गएर आए । फिसफिसेटारको गौथले जाने पुल बन्ने भयो । त्रिशुली करिडोर जुन किसिमको स्थापना भएको छ । त्यहाँ ठुलो रकम बन्ने कुरा पनि छ । कालिदहको डिपीआरको लागि कुरा गरेको छु । डिपीआर भएपछि पुल बन्न सुरु हुन्छ । कालिदह बाट खोला तर्ने वित्तिकै एउटा उकालो छ अर्को कुरा उहाँहरुले बीच बाटो बाट एउटा सडक खन्नु भएको छ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न भन्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई ।
हामी त्यहाँ ग्रावेल देखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नीलकण्ठ नगरपालिले पनि अगाडी बढ्योस् हामीले पनि र हामीले पनि केहि साझेदारी रुपमा पैसा हालिदिने छौं । रैकर बाट सुनौला बजार सम्म बाटो छेक्दिएका छौँ,अर्को भैसे बाट वडा नम्बर ७ को सुनौला बजार आउने बाटो छेक्दिएका छौं । दुई पटी बाट बाटो छेक्दिएका छौँ । त्यसको लागि नीलकण्ठ नगरपालिकाले केहि सहयोग गरेको छैन । हाम्रै पालिकाले गरेको छ ।
७. तीन वटा सडकहरु पीच गर्ने काम भैसक्थ्यो होला कोरोनाको कारणले गर्दा रोक्यो ?
लगभग कामहरु त धमाधम सुरु भैसकेको छ । अब केबल कालोपत्रे गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ । पीच गर्नेहरु सबै तराई तिरका साथीहरुलाई ल्याउन अलि समस्या परिरहेको छ । यदि उहाँहरुलाई बोलाउन सकियो भने सडक पनि पीच हुन्छ । पहिलो काम पनि साढे पाँच करोडको बुङचुङ, आरुबास र भेडाबारीको पीच गर्न मात्रै बाँकी छ । यता ३ करोडको छ । १ करोडको पीच गर्न बाँकी रहेको छ ।
८. बाटो पीच गराउने गाउँपलिकाहरुमा सिद्धलेक गाउँपालिका पहिलो बन्ने भयो होईन ?
गाउँ जाने बाटोहरु पीच गर्न सुरुवात गरेको नै हाम्रै गाउँपालिका हो । हामी कालुपाण्डे राजमार्ग बाट तीन वटा बाटोहरु पीच गर्ने छौँ । मेरै पालोमा ग्रावेल त भ्याउछु । रिङरोड छ बैरेनी, पिपल नलाङ र ठाँटी कमलबारी एउटा एउट बुङचुङ, अरबास, भेडाबारी कमलबारी जोडियो ।
यतापटि परेवाटार, कुम्पुर भन्ज्याङ, बाघबच्छला र कालिदह यसरी तीन वटा बाटोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्प कंडेलले सडक निर्माणको लागि १० करोड हाल्दिने भन्नु भएको छ । यता खिलबहादुर मार्गमा आन्तरिक तथा कानुनी मन्त्रालयका शालिकराम जमकट्टेल र मुख्य मन्त्री बाट १ करोड रुपैँया हाल्दिनु भएको छ । अरु काम भयाईसकेको छ अब कालो पत्रे गर्न मात्रै बाँकी छ ।
९.आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने खुबी पनि चाहिन्छ राजनितिमा ?
म नेताहरुलाई गाउँपालिकामा ल्याएर घुमाउछु । अस्ति पनि समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई र सचिवलाई लिएर गए । कालिदह बाट पसेर परेवाटार सम्म पुर्याएको छु ।
त्यहाँ पनि धेरै राम्रो भएको छ । विकास निर्माण भन्दा कोरोना बाट पहिलो प्राथमिकतामा जनतालाई बचाउनु पर्छ त्यसपछि भौतीक निर्माणमा सबै बनिसकेको छ । स्वास्थ्य चौकी पनि सबै बनिसकेको छ । अब १५ शैयाको अस्पताल बनाउनको लागि कुरा गरिरहेको छु ।
(विष्णु घले नलाङ कालिदह हाल दुबई :
१० सिद्धलेक गाउँपालिाकाको क्वारेन्टाईनमा राखेका व्यक्तिहरुलाई एक अप्ता पनि नराखि घर पठाएको भन्ने सुनिन्छ वास्तवमा के हो ? हामी विदेश बाट फर्किन गाउँपालिकाले कस्तो भुमिका खेलेको छ ? मेरो कम्पनी पनि बन्द भैसक्यो काम गर्न पाएको छैन ।
जो व्यक्ति स्वस्थ्य छन् उनीहरुलाई चेकअप गराएर विदेश बाट आएको दिन समेत हिसाव गरेर पठाएका छौं । आरडिटी कसैलाई सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसले गर्दा आरडिटी किनेर ल्याएर उहाँहरुलाई जाँच गराएर नेगेटिभ आएपछि मात्रै घरमा पठाएका हौं । पोजेटिभ निस्किएका २ जना साथीहरु रहेका छन् ।
उहाँहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि हामीले घर पठाईदिने छौं ।
अर्को कुरा हाम्रो जति पनि सिद्धलेक गाउँपालिकाका दाजुभाईहरु हुनुहुन्छ विदेशमा उहाँहरुलाई अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलबाटै सरकारले रेस्क्यु गर्छ त्यसपछि हामीले जिम्मा लिनुपर्छ । अस्ति भर्खर दुबईमा प्लेन गएको थियो त्यहाँको राजदुतावासमा गएर तपाईले सम्पर्क गर्नुपर्छ । र यहाँ आएपछि पालिकाले सहयोग गर्ने छ ।
११. अब भारत बाट अन्दाजमा भन्नुपर्दा कति जति मानिसहरु आउलान् ?
भारत बाट आउनेको संख्या घट्या जस्तो लाग्छ । किनकि, त्यहाँ लकडाउन खुलेपछि कामका लागि गएकाहरु ज्यान जोखिममा राखेर पनि काम गरिरहेका छन् । ७ सय जना छन् त्यहाँ । ती मध्ये १ सय ५० जना जति आएका छन् । तेस्रो मुलक बाट आउने मानिसहरु ४ सय ५ जति होलान् ।
काममा बसेका मानिसहरु अब आउने अवस्था देखिदैन । यदि आउने हुनुहुन्छ भने गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्ने छौं । स्थाानीय तह नभएको भए भयावहको स्थिति आउथ्यो । अहिले सम्म भारत बाट आएकाहरुलाई उद्धार गर्दा जम्मा साढे ७ लाख मात्रै खर्च भएको छ अन्य छुटपुट त बाँकी नै छ ।
१२. केहि गाउँपालिकाहरुले ५० लाख ६० लाख सकिसक्यो भन्नुहुन्छ तर तपाईको त जम्मा साढे ७ लाख मात्रै खर्च भयो ?
हामीले ४२ लाख प्रकोप व्यवस्थापनमा राखेका छौँ । साढे ७ लाख को खर्चको बिल हामीले सबै कर्मचारीको हात हातमा दिएका छौँ । सिद्धलेक गाउँपालिकाको पेजमा पनि हामीले राखेका हुन्छौं सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ ।
१३. कालिदहमा पुल कहाँ बाट हुन्छ र पहिला पनि डिपीआर गरेको जस्तो लाग्थ्यो ?(अनिल श्रेष्ठ)
प्राविधिकको अध्ययनले उसले जहाँ भन्छ त्यही ठाउँमा हुने हो । जहाँ भए पनि विकास हुने हो । पुल बन्यो भने अहिले भईरहेको बाटो बन्द हुने छैन । प्राविधिकले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही काम हुन्छ । कसैले विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यो त एउटा अबजसी पेशा हो । जति राम्रो काम गरेता पनि नराम्रै हुने ।
१४. गाउँपालिकामा विकास लगभग लगभग कत्ति जति भयो होला ?
त्यसको अभिलेख त गाउँपालिकाको डाटामा हेर्नै पर्छ । ६२ सय १२ घरमा खानेपानीको व्यवस्थाको काम लगभग पुरा हुने चरणमा रहेको छ । अर्को कुरा सडक संजालको क्षेत्रमा पनि कालोपत्रे गर्ने तयारीमा छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नको लागि सबै विद्यालयको अवस्था बुझ्नको लागि अभिलेख तयार पारेका छौं ।
प्रत्येक विद्यालयमा लेखावृत भएन भने सबै तलब कटौती गर्ने भनेका छौँ । कृषिको क्षेत्रमा पनि हामीले वैदेशिक रोजगार बाट आएकाको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ गाउँपालिकाले। गाउँपालिकामा खसी बोका बेच्ने ट्रस्ट बनाउने योजनामा छौं । कृषिमा पनि प्राविधिक रहेकोले कृषिमा केहि समस्या भयो भने तुरुन्त हामीले खटाउने छौं । स्वास्थ्य चौकीमा सबै प्राप्त रुपमा दरबन्दी राखिदिएका छौँ । गाउँपालिकावासिहरु स्वास्थ्य सेवा बाट कहिल्यै वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हिसावले स्वास्थयकर्मीहरु खडा गरेका छौँ ।
१५.आगामी आर्थिक वर्षको बजेट के मा केन्द्रित गर्छौ र त्यहाँको जनताको जिवनस्तर माथि उकास्नको लागि के गर्छौ ?
पहिलो प्राथमिकता हामीले कृषिलाई दिने छौं । त्यस्तै गरि हामीले काठे पोल विस्थापीत गर्ने । शिक्षामा मा.वि र नि.मा वि दरबन्दी भएको ठाउँमा संघ र प्रदेशले पैसा दिने थियो त्यो पैसा नदिने भएर अब त्यसलाई छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा सबै डिपबोरिङ अब आउने सालमा पुरा गर्ने छौं ।
मुलाबारीका वासिन्दाहरुले खानेपानी पाईरहनु भएको छैन । पमसेट विग्रीएर । मैले तत्कालै एउटा मेसिन ल्याएर जाँचबुझ गर्ने छु । विगतको सालमा ६१ करोड ५० लाखको बजेट थियो भने अहिले प्रदेश संघ बाट २१ करोड आएको छ । अहिले हाम्रो बजेट घट्छ विगतको भन्दा । विगतमा २६ करोडको थियो अहिले साढे २१ करोड जति छ । अरु पैसा सर्सत अनुदानको घटेको अवस्था छैन निर्सतको अनुदान घटेको छैन त्यसैले गर्दा पनि होला कम आएको छ ।
१६. अन्त्यमा रेडियो सुनेर बस्नुहुने सबैलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाईरसले हामीलाई तहसनहस बनाएको छ । यसलाई आत्मबल बढाएर जित्नुपर्ने र सावधानी अपनाउनुपर्ने छ । आफु सजगता भएर बस्न सक्यौं भने हामीले अवश्यनै यसलाई जित्न सक्छौं । विकासका कुराहरुमा सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका साथीहरुले विकासको गतिलाई अगाडी बढाउनुपर्छ ।
आर्थिकलाई पनि पारदर्शिता अपनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ नत्र भने जनताको विश्वास टुट्दैन र सहानुभुती पाउछौं । तपाईको गाउँ ठाउँ बनाउने आफैले हो । यसरी काम गर्न सकियो भने देशको विकास हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ यसमा सबैले सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध पनि गर्दछु । अन्त्यमा नीलकण्ठ एफ.एम परिवारलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १३, २०७७
विदेशमा मृत्यु,अंगभंग वा विरामी भई फर्किएका श्रमिकका बालबालिकालाई छात्राबृत्ति दिईने १० घण्टा पहिले
विदेशमा मृत्यु,अंगभंग वा विरामी भई फर्किएका श्रमिकका बालबालिकालाई छात्राबृत्ति दिईने Dhading Sanchar
धादिङमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय ४४ पुग्यो(विवरण सहित) Dhading Sanchar
नीलकण्ठ नगरपालिका–५ का १ पुरुषमा कोरोना पुष्टि Dhading Sanchar
त्रिशुलीबाट बालुवा निकाल्न दिनुपर्ने माग राख्दै मजदुरहरु आन्दोलित १५ घण्टा पहिले
नीलकण्ठ–९ का मृगौला पिडित रिजाललाई मकाउबाट आर्थिक सहयोग मंगलबार, साउन २०, २०७७